eNasha.com - हरियो डाँडाको पर्याय
हरियो डाँडाको पर्याय
जबजब हामी 'हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी...' लोकगीत सुन्छौँ, तबतब हामीलाई एक साथ नेपाली मूल्य, मान्यता, परम्पराको एक साथ झल्को आउँछ । यो गीत नेपाली जनजीवनको मानक हो । यो गीत नेपालीहरुको वास्तविकता हो । यो गीत नेपाली परम्पराको द्योतक हो । अनि यसका सर्जक धर्मराज थापालाई त्यसबखत हामीले नसम्झिरहन कहाँ सक्छौँ र !
लामिछाने थापाका पुर्खाहरु कर्णाली- जुम्लाको सिंजाटार हुँदै कास्की आएका थिए । तिनै थापा खलकमा वि.सं. १९८१ सालमा पोखराको बाटुले चौरमा भुवनबहादुर थापाको जन्म भएको हो । पाँच वर्षको पुग्दानपुग्दै १९८५ सालको श्री पञ्चमीका दिन बिहान भुवनलाई शारदाको स्तुतिपाठ गरी गुरुले आक्षराम्भ गराएका थिए । अनि यसै वर्ष भुवनलाई मातृवियोग पनि परेको थियो ।
पाठशालामा पढ्दै गर्दा भुवनको वाचन कलाको साथै कण्ठको माधुर्यता पनि बढ्दै गयो । भुवनको वाचन खुलेको देखेर गाउँका बूढापाकाहरु प्रशंसा गर्ने गर्दथे । एक दिन पाठशालामा गुरुदत्तले भने- "यो भुवनले धर्मकर्म गर्लाजस्तो छ । त्यसैले यसको नाम फेरिदिनु पर्छ ।" आफ्ना गुरुले उनलाई त्यही दिन नयाँ नाम दिए- धर्मराज । उनले आजपर्यन्त त्यही नामलाई ज्यूँदो राखेका छन् र यही नामले सारा नेपालीले उनलाई चिन्दछन् ।
उसबेला समयमै छोराछोरीको बिहे गरिदिनु पर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यही मान्यताअनुसार पढाइ र गोठालो गर्दागर्दै उनलाई १५ वर्षको उमेरमा १९९६ बैशाख २८ गते १३ वर्षीया सावित्री विष्टसँग बिहे गराइदिए । अहिले धर्म-सावित्रीका तीन छोरा, १२ छोरी र आठ नातिनातिना छन् । जेठी छोरी ज्ञानु राणा त प्रख्यात गायिकाकै रुपमा परिचित छिन् ।
पुस्तौँदेखि प्रशस्त पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएकाले आर्थिक समस्या कहिल्यै झेल्नु परेन उनलाई । हुन पनि पिता हर्कबहादुर थापाका एक मात्र सन्तान भएकाले उनलाई सम्पत्तिको छेलोखेलो रहिरहृयो ।
१५ वर्षको उमेरमा बिहे गरेलगत्तै श्रीमतीलाई पोखरा नै छाडी उनी काठमाडौँ छिरे । जहाँ, डिल्लीबजारस्थित भारदारी दोस्रो तथा तेस्रो फाँटमा फैसलाका नक्कल उतारी गुजारा चलाउन थाले । पछि निजामति मध्यमा उत्तीर्ण गरी २००१ सालमा श्री ३ सरकारको तर्फबाट गुठी बन्दोबस्त अड्डामा नौसिन्दाको जागीरे भए । सोही वर्ष प्रमोशन भई नायम मुखिया बनी गोर्खापत्र छापाखानामा सरुवा पनि भए ।
२००७ सालमा उनले भरियाले बिसायो भारी गीतबाट रेडियो नेपालमा गायन यात्रा शुरु गरेका थिए । अहिलेसम्म रेडियो नेपालमा उनले सङ्कलन तथा गायन गरेका गीतहरुको संख्या लगभग एक हजार पुगिसकेको छ ।
त्यसपछि २०१६ सालमा इलेक्सन कमिशनको प्रचार अधिकृत भई पुस्तक तथा निर्वाचन गीत रेकर्ड गरे भने मंसीर १ मा नेपाल प्रगतिशील लेखक संघको सभापति पनि चुनिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले उनलाई रेडियो नेपालमा लोकगीत प्रबन्धक नियुक्त गरे ।
पछि २०२६ सालमा रेडियो नेपाल छाडेर उनी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान (तात्कालिन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान) सहसदस्य मनोनीत भए । उनी त्यहाँ २०३२ सम्म रही नेपाली लोकगीत र लोक संस्कृतिको अध्ययन अन्वेषणका लागि अनेक योगदान दिए । नेपाली समाजमा धर्मराज थापाको नाम लोकगीतको पर्याय भएको छ । नेपालीले रेडियो सुन्न सिकेदेखि गीतका विभिन्न भाका र लय धर्मराज थापाबाट विस्तार भएका हुन् भन्दा फरक नपर्ला !
उनले लोकगीत सङ्कलन, लेखन, गायन, सम्पादन तथा अनुसन्धानमा प्रशस्त समय खर्चेका छन् ।
उनलाई लोकप्रिय बनाउने धेरै कृतिहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । रत्न जुनेली, वनचरो, पहाडी सङ्गीत, कालीको लहर, विलौना, कोसेली, रानीपोखरा, पृथ्वीको दिव्य अर्ति, गोलसिमल, गण्डकीका सुसेली, दिव्य चौतारी, मङ्गली कुसुम, हाम्रो लोकगीत, हिमालको आँशु, मुक्तिनाथ दर्शन, तनहुँ फूलबारी, वसन्ती वासन्त, नीलकण्ठ दर्शन आदि पुस्तक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
थापाका कृतिले लेखन तथा गायनमा झ्याउरेको लोकप्रिययतालाई चुलीमा पुर्‍याएका छन् ।
थापाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष अधिकांश समय लोकगीतको अध्ययन अनुसन्धानका लागि देशका विभिन्न भागमा भ्रमण गर्नु नै हो । नेपाल मात्रै होइन, उनी भारतका भाक्सु, देहरादून, आसाम, दार्जिलिङ, कालिङ्पोङ आदि प्रवासी नेपाली वस्तुहरुको भ्रमणका क्रममा प्रवासी नेपालीको सम्झनामा नेपालीले माया पार्‍यो बरी लै..., धुरुधुरु नरोऊ आमा, घर सम्झी रोएको होला...जस्ता मार्मिक गीत सिर्जना मात्र गरेनन्, त्यहाँ प्रस्तुत गरेर सबैलाई सोच्न बाध्यसमेत पारेका थिए ।
उनले नेपालको सांस्कृतिक चिनो बोकेर चीन, बर्मा, पाकिस्तानको भ्रमण समेत गरे ।
जीवन संघर्षका दौरान जति मिहिनेत नेपाली लोकभाकालाई ब्यूँताउन उनले गरेका थिए, सरकारी तथा गैरसरकारी तर्फबाट उनलाई त्यसको पूरापूर कदर भएको छ । २०११ सालमा प्रथम राष्ट्रव्यापी कवि सम्मेलनमा प्रथम, २०१३ सालमा उनको योगदानको कदर गर्दै राजा महेन्द्रबाट जनकविकेशरीको पदवी, श्री ५ महेन्द्र शुभराज्याभिषेक तक्मा पाएका थिए । त्यस्तै २०२५ सालमा मदन पुरस्कार, सोही सालमा इन्द्रराज्यलक्ष्मी पुरस्कर, त्यस्तै लोक साहित्य पुरस्कार, रत्नश्री स्वर्ण पदक, गोदबा, वीरेन्द्र-ऐश्वर्या सेवा पदक, युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार, जगदम्बाश्री पुरस्कार, साझा पुरस्कार २०४१, छिन्नलता गीत पुरस्कार, कुमुदिनी होम्स पुरस्कार, पोखरा नवरत्न तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट पनि सम्मानित भएका छन् ।